တကယ်​ကြုံမှယုံတာပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » တကယ်​ကြုံမှယုံတာပါ
Posted by aye.kk on Oct 2, 2014 in Buddhism, Poetry | 15 comments
နှိပ်​စက်​ပြင်းမှု မယွင်းကြုံမှဆင်းရဲခြင်း ဆိုတာကို
နာမ်​ဆိုတဲ့ငါ့စိတ်​​လေးက အကြွင်းမဲ့လက်​ခံယုံသွား တာ
သဂျီး အယာတိုလာခိုမ်မေနီက အယုန်ဖူးဒဲ့..
ဘုန်းဘုန်းတို့ချမ်းသာလေ..။ (စိတ်ပြောတာနော.. စိတ်..ဆိတ်..)
နိုင်ငံပျက်ကိန်းဆိုက်လေ…။ (ရုပ်ပြောတာနော.. ရုပ်..ယုတ်)
​လောကကြီးကို ဦး​ဆောင်​​နေတာက စိတ်​
စိတ်​ဆိုတဲ့နာမ်​က အရာရာကိုဖန်​တီးနိုင်​စွမ်း အားအပြည့်​အဝရှိ​နေတာ အမှန်​ပါ စိတ်​မှာ စွမ်းအား အပြည့်​အဝရှိမရှိ တကယ်​သိချင်​ရင်​ တကယ်​စမ်းသပ်​ကြည့်​ပါ တကယ်​ရှိ​တာကို တကယ်​ကြုံမှယုံမှာပါ အဲ့လို..အဲ့လို ​ဆိုချင်​တာပါ သူကြီး
ပတ်စ်ဝပ်ကိုပြင်လိုက်.. ကြောင်တွေကို.. ပေးမသုံးနဲ့..။
ကိုယ်​တိုင်​ကကြောင်မဟုတ်​ရင်​ ကြောင်​ဆိုတာ ပေါက်တတ်ကရရေးတတ်တယ်လို့.. ယုံမှာမဟုတ်..။
အန်တီအေးနဲ့တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မိတ်မဆက်ရသေးဘူး။ ကျမကတော့ ဂွဇွတ်ရွာရဲ့ နာမည်ကျော် မိစ္ဆာဒိဌိ ပါရှင့်။ သဂျီးနဲ့ ခံယူချက်ချင်း တူသလိုလို ရှိပေမယ့် တကယ်ကတော့ မတူပါဘူး။
. ကျမတို့ဟာ ideology တွေနဲ့ တိုက်ကြခိုက်ကြတယ်။ အဲဒီမှာ လောကီသမားနဲ့ လောကုတ်သမားတွေ အမြင်မတူဘူး။ ဒါပေမယ့် ဦးတည်ရာကတော့ တူမယ်ထင်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ နပန်းသတ်ကြသလဲဆိုတော့ ရည်ရွယ်ချက်က လူ့တန်ဖိုးကို ဖွေရှာဖို့ပါပဲ။ လောကီသမားတွေကတော့ မြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ ကြုံ ကြိုက်ဖို့မလွယ်တဲ့အတွက် ဒီဘ၀မှာ ဘာသာသာသနာအတွက် လုပ်မှ လူဖြစ်ရကျိုး နပ်တယ်ထင်တယ်။ လောကီသမား ကျမ တို့အတွက်ကတော့ လူ့တန်ဖိုးကိုမြင်တဲ့နေရာမှာ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရဖို့ကို မြင်ပါတယ်။
.အဲဒီမှာ ယုံခြင်း မယုံခြင်း ဆိုတဲ့အပိုင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမလား။ ယုံခြင်း မယုံခြင်းထက် ထည့်သွင်း မစဉ်းစားခြင်းဆိုတာကိုရော။ ဥပမာ သဂျီးက ငရဲ ရှိတယ်လို့ မယုံဘူး။ သူများတွေက ငရဲရှိတယ်လို့ယုံတယ်။ ကျမကတော့ ငရဲကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ငရဲ ရှိရှိ မရှိရှိ ဆင်းရင်လည်း ကိုယ်တစ်ယောက်ထဲမှ မဟုတ်တာ။ အများနဲ့ ဆင်းရမှာဆိုတော့ ဒါကို ကြောက်စရာလည်း မလိုဘူး။ ထည့်သွင်း မစဉ်းစားတော့ဘူး။ အဲသလို။
.နောက်တစ်ခု ဥပမာ ဦးစံလင်းကြီး နဂါးယုံတယ်။ နဂါးယုံတဲ့လူတွေ မယုံတဲ့လူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒီမှာ နဂါးကို ရှိတယ်လို့ ယူဆကြမယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ အဲဒီနဂါး ကတိမတည်ဘူး။ ကောင်းကျိုး မပေးဘူး။ ဒါကြောင့် သူ့ဟာသူ ရှိရှိ မရှိရှိ ထည့်သွင်းမစဉ်းစားတော့ဘူး။ အဲဒီလို။
လူတစ်ယောက်ဟာ တကယ်လို့ နတ်ရှိတယ် မရှိဘူးဆိုတဲ့ ကိစ္စကြီးကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘူးဆိုရင် ဘာဖြစ်နိုင်သလဲ။ အဲ့လာလေး မေးကြည့်တာပါ။
ယုံခြင်းမယုံခြင်းထက်​ထည့်​သွင်းမစဉ်းစားတာပါ။ ကိုယ့်​ကိုယ်​ကိုယုံကြည်​တဲ့စိတ်​​လျော့သွားမှာစိုးလို့။ ငရဲဆိုတာကိုလည်းအခု​နောက်​ပိုင်း​တွေးပြီးမ​ကြောက်​​တော့ပါဘူး။ နတ်​ပြာ်​ဆိုတာကိုလည်း ကိုယ်​သွားချင်​တဲ့ ခရီး​တွေ​လောက်​စိတ်​မ၀င်​စား​ပါဘူး။ ဘိုး​တော်​​တွေထက်​ သပ်​ရပ်​တဲ့မျက်​လှည့်​ပြကွက်​​တွေကပိုစိတ်​၀င်​စားဖို့​ကောင်းတယ်​။
ပစ္စုန်​ပ္ပန်​ အ​နေအထား​ပေါ်မှာသာ မူတည်​ပါတယ် မအိုခင်​မှာ အိုခြင်းသ​ဘောတရား ဆိုတာ ခန္ဓာကမသိမခံစား တဲ့အတွက်​
အ​တော်​များများက အမှုမဲ့အမှတ်​မဲ့​နေလာကြမှာပါဒါကလည်းမိမိကိုယ်​တိုင်​က ​နေလာခဲ့မိလို့ပါ မိမိထင်​မြင်​ချက်​ပါ အားလုံးဟာ ကိုယ်​ပိုင်​အမြင်​ ကိုယ်​စီရှိကြပါတယ်​ မငြင်းလိုပါဘူး ညီမဝင့်​ပြုံးမြင့်​​ရေ….
အမြင်မကြည်လင်ရင်တော့ မှုံဝါးဝါး အူကြောင်ကြား ဖြစ်တတ်သတဲ့(စကါးပုံ-ပြောပြတာ)
ဘယ်​​လောက်​ပဲ ဆင်းရဲ ဆင်းရဲ ဘယ်​​လောက်​ပဲ ဒုက္ခ ​တွေ ​တွေ့မလဲ ဒါ​ပေမဲ့ လူ့​လောကထဲမှာ လူသားဆန်​စွာ ပြုမူ​နေထိုင်​ပါ​သေးတယ်​ ။
-ဆိုတာကိုဖတ်ပြီး ရိပ်သာခဏခဏ၀င်တဲ့သူငယ်ချင်းက ရိပ်သာတစ်ခုကထွက်ထွက်ချင်း ဖုန်းနဲ့လှမ်းတိုက်တွန်းတာအမှတ်ရမိတယ်။
ဆိုတော့ တိခနဲပိုင်းခံရတဲ့ စက္ကန့်ပိုင်းလေးဒုက္ခကလည်းကြီးတာပဲတဲ့။
ဘ၀တစ်လျှောက် အစစအရာရာကိုယ်ချင်းစာစိတ်မွေးပြီး ဆင်ခြင်နေထိုင်ပြုမူပြောဆိုနိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးလို့ထင်မိပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဆိုလိုတဲ့.. ဒုက္ခကို.. ကိုယ့်သဘောနဲ့ကောက်ယူပြောနေကြလို့ဖြစ်တဲ့.. ပြဿနာလို့ထင်မိတယ်……။
အဲဒီလိုသေတဲ့..စက္ကန့်ပိုင်းဒုက္ခဆိုတာလေးကို.. မဖြစ်လာဖို့.. ကိုယ့်ရဲ့.. လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်တဲ့… လူ့ဘ၀သက်တမ်းတခုလုံး(ဒါမှမဟုတ်) တချို့တပိုင်းကိုစတေး.. ဘာသာရေးဆိုတာလုပ်နေကြသူတွေက.. ဗုဒ္ဓအလိုကျမဟုတ်ဖူးလို့.. ပြောချင်မိကြောင်း…။
တခါတလေကျတော့ တချို့ဘုန်းကြီးတွေက ခြိမ်းခြောက်နေသလိုလိုအမြင်မှားမိတယ်။
အခုဆိုရင် နိဗ္ပန်ရောက်ကြောင်းဟောတဲ့ကိုယ်တော်တွေထား နိဗ္ပန်သွားရာလမ်းမပျောက်စေဖို့လို့ နိဒါန်းချီပြီး ဟောလာတဲ့ မဘသဘုန်းကြီးတွေတရားပွဲတွေတော်တော်တွေ့လာရတယ်။